Ihe niile banyere nzukọ eCommerce nke mbụ Live | ECommerce ozi ọma
eCommerce Conference Live, ihe omume ị gaghị echefu
Monica sanchez | | Ihe omume
Have nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ na-eche echiche ịtọlite ​​ya? Needkwesịrị ị nweta azịza n'aka ndị ọkachamara maka ajụjụ gị metụtara azụmahịa gị? Ọ bụrụ na ị zara ee ee otu n'ime ajụjụ ndị a, n'ezie ị nwere mmasị n'ihe omume ahụ Nzukọ eCommerce Live.
N'ime otu ụbọchị, ị ga-enwe ike ịmụ maka azụmaahịa dị n'ịntanetị, kamakwa maka ịzụ ahịa. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ bụ kpam kpam.
1 Kedu ihe bụ nzukọ eCommerce Live?
2 Kedu ndị ọkà okwu ga-esonye na mmemme ahụ?
3 Kedu mgbe ọ ga-ewere ọnọdụ na gịnị bụ nhazi oge ahụ?
Kedu ihe bụ nzukọ eCommerce Live?
Ọ bụ ihe mbụ eCommerce omume na Gụgharia, nke Ndị na - ekwu okwu 12 ga - agwa gị okwu maka otu esi emepụta azụmahịa na ntanetị, aghụghọ iji nọgide na-enwe ya ma nwee ihe ịga nke ọma, gịnị kpatara o ji dị mkpa inwe ezigbo nhazi nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ihe ị ga-eme iji dọta ndị ọbịa na na ha nwere ike ịbụ ndị na-azụ ahịa, na ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọzọ na a ụbọchị na-ekwe nkwa pụrụ iche na pụrụ iche.
N'ihi na anyị niile maara na ịnwe azụmaahịa dị n'ịntanetị ị gaghị etinye oge na ego naanị n'ihe anyị nwere ike ịkpọ "ihu mara mma", nke gụnyere aha ngalaba na imewe ahụ, mana ị ga-amakwa otu esi arụ ọrụ ihe odide ahụ ka ha wee nwee mmasị na ha na ndị ọbịa na, yabụ, dịkwa na Google.
Ma ọ bụrụ na ị nwekwara ike iru eru maka ihe nrite, ọ dị mma ... ọ ka mma, ọ bụ eziokwu? 🙂
Kedu ndị ọkà okwu ga-esonye na mmemme ahụ?
Dika ọ ga - apụ iche, ọ ga - enwerịrị nsonye nke ezigbo ndị ọkachamara ọ bụghị naanị na ngalaba a ruo ogologo oge, kamakwa mara ihe niile dị mkpa iji chịkwaa ya ... ma merie ya n'enweghị nsogbu. Ya mere, ha nwere okwu iri na abụọ a:
Joan Boluda: onye bu onye na ere ahia na ntaneti, na onye nwe uzo boluda.com.
Eva Lacalle: Resprụ ọrụ maka webmarketing na PrestaShop.
Jordi Ordonez: ọkachamara na ecommerce na onye na-enye ọzụzụ.
Ismael ruiz: ọkachamara n'ahịa ịzụ ahịa.
Vivian Francos: nke na-eme ka hashtag na-achọpụta ihe omume gị, akara, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Maria Diaz: njikwa mba doppler.
Marc njem: SEO na BlackHat ọkachamara.
JuanKa Diaz: Onye nrụpụta n'ihu na mmepe ụlọ ọrụ jdevelopia.com.
Fernando Angulo onye nhazi ihe oyiyi: onye bụ Onyeisi nke Mmekọrịta Mba Nile na SemRush.
Carlos Chamber: CTO nke hepta.es, na onye nrụpụta nke PrestaShop na Joomla!
Ọ bụ Armando Salvador: Onye nkụzi PrestaShop.
David ayala: Ọ bụ onye okike nke web soywebmaster.com na #seorosa.
Kedu mgbe ọ ga-ewere ọnọdụ na gịnị bụ nhazi oge ahụ?
Nwere ike ịhụ ihe omume ahụ n'echi ya 12 maka November. Ọ ga-ebido n’elekere itoolu nke ụtụtụ wee gwụ na 9:30. N’ezie, a ga-enwe ezumike nri ehihie n’ehihie.
Okwu niile a na-ekwe nkwa, mana ọ bụrụ na anyị ga-atụ aro ụfọdụ, ọ ga-abụ nke Joan Boluda na elekere iri, na JuanKa Díaz na elekere 10. N’ebe ndị a ka ị ga - enwe ike imeziwanye eCommerce gị nke ukwuu. A nabata enyemaka ọ bụla
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye pịa ebe a ma were ohere ahụ mụta ihe site na nke kacha mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ihe omume » eCommerce Conference Live, ihe omume ị gaghị echefu
Ọnụahịa ụlọ ahịa PrestaShop n'ịntanetị
Lọ nkwakọba ihe Amazon na Spain